Fomba Niatrehana ny Fitomboana, Repoblika Dominikanina | Diary 2015
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Arabo Armenianina Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Ossète Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Tsonga Xhosa Yorobà Zoloa
Tiany hovonjena “ny karazan’olona rehetra”
Tena tian’i Jehovah ny “hamonjena ny karazan’olona rehetra sy ny hananany fahalalana marina tsara ny fahamarinana.” (1 Tim. 2:4) Miezaka mafy àry ny Vavolombelon’i Jehovah eto amin’ny Repoblika Dominikanina mba hitory amin’ny olona rehetra hatraiza hatraiza, eny fa na ny any am-ponja aza.
Any San Cristóbal no misy ny Fonjan’i Najayo. Nitsidika tao isan-kerinandro ny mpisava lalana manokana roa, tamin’ny 1997, ary nahita an’i Gloria, avy any Kolombia. Tovovavy 23 taona izy io, ary nogadraina satria tratra nivarotra zava-mahadomelina. Efa imbetsaka izy no niresaka Baiboly tamin’ny anabavy iray, izay nigadra tsy ara-drariny. Nitondran’ireo mpisava lalana an’ilay boky hoe Fandresen-dahatra Miorina Amin’ny Soratra Masina sy boky hafa koa i Gloria, mba hanampiana azy hahita ny valin’ny fanontaniany. Nafana fo be izy sady nazoto nianatra, ka nisy vokany tamin’ny voafonja hafa izany. Nitombo foana àry ny olona notsidihina isan-kerinandro.
Tena nanova be an’i Gloria ny fahamarinana, ka lasa mpitory tsy vita batisa izy tamin’ny 1999. Nitory adiny 70 mahery isam-bolana izy tao am-ponja. Nandroso tsara koa ny mpianany enina. Nangataka famotsoran-keloka tany amin’ny filoham-pirenena izy tamin’ny 2000. Nafahana izy satria tsara fitondran-tena, ka nalefa nody tany Kolombia. Natao batisa izy tamin’ny 2001, na dia tsy nanaiky an’izany aza ny fianakaviany.
Tany am-ponja no nahalalan’i Gloria Cardona ny fahamarinana. Mpisava lalana izao izy sy ny vadiny
Nanao mpisava lalana i Gloria rehefa vita batisa. Nanambady izy ary anti-panahy izao ny vadiny. Samy mpisava lalana maharitra izy mivady, ary manitatra faritany any Kolombia. Efa betsaka ny olona nampian’i Gloria ho lasa Vavolombelona vita batisa. Nilaza izy fa ananan’i Jehovah trosa, ka ny manampy ny hafa hahalala ny fahamarinana no hitany hoe fomba tsara indrindra hanefana an’izany. Izany mantsy no nataon’olona taminy.
Asehon’ny tantaran’i Gloria fa mbola afaka mahalala ny fahamarinana mamonjy aina foana ny olona, na dia any am-ponja aza. Nihaona tamin’ny manam-pahefana tao amin’ny Birao Foibe Miandraikitra ny Fonja ny solontenan’ny sampana. Nangataka izy ireo mba havela hampianatra Baiboly any amin’ny fonja maro kokoa ny Vavolombelon’i Jehovah. Rahalahy 43 sy anabavy 6 àry no nahazo alalana hampianatra Baiboly any amin’ny fonja 13.
“Halavao ny tady manenjana ny lainao”
Nisy mpitory 21 684 sy fiangonana 342 ary fampianarana Baiboly 34 380 eran’ny Repoblika Dominikanina, tamin’ny faramparan’ny taonjato faha-20. Nisy 72 679 ny mpanatrika ny Fahatsiarovana. Nanaraka an’ity tenin’i Isaia ity àry ny vahoakan’i Jehovah: “Halalaho ny tranolainao, ary aoka hohenjanina ireo lamban’ny tranolainao lehibe. Aza mihafihafy mihitsy rehefa manao izany. Halavao ny tady manenjana ny lainao.”—Isaia 54:2.
Anisan’ny niteraka olana, ohatra, ny resaka Efitrano Fivoriambe. Roa ihany mantsy ny Efitrano Fivoriambe eto. Ny iray eto akaikin’ny sampana eto Saint-Domingue, ary ampiasain’ny olona eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Vita tamin’ny 1996 izy io. Ny iray kosa ao an-tanànan’i Villa González, ary ampiasain’ny olona any amin’ny faritra sisa. Efa tena simba anefa izy io, ka tena nila namboarina na naverina naorina.
Neken’ny Filan-kevi-pitantanana ny hanorenana Efitrano Fivoriambe vaovao tamin’ny 2001. Teo amin’ny tanintsika tao Villa González no hanorenana azy io, ary antonona olona 2 500 ilay izy. Faly koa ireo rahalahy fa hanorenana trano iray hafa eo akaikin’izy io. Ao no hatao ny Sekoly Fampiofanana ho Amin’ny Fanompoana (novana hoe Sekolin’ny Mpitory Ilay Fanjakana). Hisy efitra fatoriana ao, efitra fianarana, famakiam-boky, lakozia, ary efitra fisakafoana. Tamin’ny 2004 izy ireo no notokanana, ka i Theodore Jaracz, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, no nanao ny lahateny fitokanana. Kilasy 15 no efa natao tao.